‘आनो’ले सताउँछ ? यस्ता छन् रोकथाम र उपचार विधि – Bihani Online
‘आनो’ले सताउँछ ? यस्ता छन् रोकथाम र उपचार विधि
२२ भाद्र २०७४ ११:४० September 7, 2017 Deependra Saru
बिपी कोइराला लायन्स सेन्टर फर अप्थेल्मिक स्टडिजका नेत्ररोग विशेषज्ञ आँखा महत्वपूर्ण र संवेदनशील अंग हो। आँखाको हेरचाहा र सरसफाइमा अलिकति पनि लापरबाही हुने बित्तिकै विभिन्न किसिमका समस्या देखा पर्छन् । सुरुसुरुमा सामान्य त हो नि भनेर समयमै उपचार नगर्दा पछि जटिल समस्या निम्तिन्छ। आँखाका विभिन्न समस्यामध्ये एउटा हो, ‘स्टाइ’ अर्थात् बोलिचालीको भाषामा ‘आनो’, जुन ‘स्टेफिलोकोकस ब्याक्टेरिया’को संक्रमणका कारण हुन्छ।
परेला भएको ठाउँ अर्थात् आँखाको ढकनीमा भएको बोसोयुक्त ग्रन्थीमा जीवाणूको संक्रमण भएपछि पीडादायक गाँठो बन्छ। यो आँखाको माथिल्लो या तल्लो दुवै भागमा आउन सक्छ। यस्तै, आँखाको ढकनी बाहिर वा भित्र पनि आउन सक्छ।
आनो बालबालिकामा बढी देखिन्छ। तर बारम्बार दोहोरिएको खण्डमा आँखा जाचँ गराउनुपर्छ। यसरी आनो बारम्बार आउनु भनेको बालबालिकाको दृष्टिसँग सम्बन्धित समस्या पनि हुन सक्छ। बुढापाकामा आनोको समस्या देखिए मधुमेहको जाँच गराउनुपर्छ । दृष्टिमा समस्या भए समयमै परीक्षण गरेर चस्मा लगाउनुपर्छ। धुलो, धुवाँ र फोहोरबाट आखाँलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। समयमै उपचार गरिएन भने आनो फुटेर संक्रमण भई थप दृष्टि सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुने भएकाले चिकित्सकको परामर्श लिनु नबिर्सिनु होला ।
स्वास्थ्य खवर डट कम बाट
नवलपरासीमा चारवटा वडामा कांग्रेस प्यानल विजयी
गुड न्यु आइटिसी ट्रेनिङ्ग सेन्टर तथा ब्युटी पार्लरको ९ दिने तालिम सम्पन्न
म्यानचेस्टर सिटीलाई लगातार तेस्रो पटक काराबाओ कपको उपाधि
मेरो सपनामा दलित समुदायको साथ रह्यो : प्रधानमन्त्री दाहाल
चर्चित सर्जक केशी दशैं खर्च नहुदाँ पिडामा
छक्का पञ्जा २ को टेलर रिलिज